प्रचण्डले विना मगरको प्रशंशा गर्दै भनेः भैरवनाथ गणमा या’तना खाएकी हुन् (भिडियोसहित) « Etajakhabar
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुहारी विना मगरको प्रशंशा गरेका छन् । विनाले राजनीतिमा ठुलो योगदान गरेको भन्दै भैरवनाथ गणमा समेत या’तना भो’गेको स्मरण गराए ।
यसअघि बुहारी विना मगरलाई खानेपानी मन्त्री र छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाइएपछि प्रचण्डमाथि परिवारलाई पदमा लान केन्द्रित भएको आरोप लागेको थियो । त्यसलाई नेकपा विभाजनपछि ओलीले समेत उठाएका छन् । जवाफमा प्रचण्डले आफ्ना छोरीहरु र बुहारीले जनयु’द्ध देखि जोखिम मोलेर काम गरेको सुनाए । आफूले छोराछोरीलाई विदेश पढ्न नपठाएर क्रान्तिमा होमेको उनको भनाई थियो ।
प्रचण्डले आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको राजनीतिमा ठुलो योगदान भएको स्मरण गराए । ‘यु’द्धका बेलामा म’र्न हिंडेका होइनन् र ? जेलनेल या’तना भोगेर आएका हुन् र ? क्रान्तिमा सबै हो’भिए त्यो मेरो दोष हो,’ उनले भने,‘भैरवनाथ गणमा तीन वर्ष ला’पता भएर या’तना खा’एर ब’से । रोल्पा रुकुमका भीरपाखामा कुदे मेरा छोरीहरु ।’ उनले आफूले यु’द्ध’मा छोराछोरीलाई विदेशमा पढ्न नपठाएको समेत बताए ।
ओलीले आफूलाई सि’ध्या’उने उद्देश्यमा अहिलेको कदम चालिरहेको आ’रोप लगाए । उनले ओलीमाथि जा’लझेल र ष’ड्यन्त्रको आरोप लगाए । उनले भने,‘केपीजीको एकमात्र उद्देश्य प्रचण्डलाई सि’ध्या’उने रहेछ ।’ प्रचण्डलाई सि’ध्या’उनका लागि गणतन्त्र नै स’खाप पार्न खोजेको आरोप लगाए ।
संविधानलाई कुल्चने काम भएको र ह त्या नै गर्न खोजिए देश अ’राजकताको भुँमरीमा फस्ने ख’तरा औल्याए । आफू मूलधारको राजनीतिमा आइसकेको तर ओलीको कदमवि’रु’द्ध वि’द्रो’ह गर्नेहरु अरु निस्कने र त्यसलाई द’मन गर्न खोज्दा अराजकता निम्तनसक्ने बताए । उनले भने,‘संविधानको ह’ ‘त्या गर्ने कार्य भएमा नेपाल फेरि अ’राजकताको सुरुङभित्र पस्यो ।’